यी ५ राशिका मानिसले प्राय: प्रेम विवाह गर्छन् ! – Krazy NepaL
May 22, 2021 670
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसकाे जन्म बार र समयबाट जन्मकुण्डलीबाट भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो। मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ। विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ।
कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन ?
आईतबार: आइतबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता व्यक्ति कम बोल्ने र शिक्षामा अगाडी हुन्छन्। यो बार जन्मिने व्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुशी राख्न अधिक प्रयास गर्छन्।
सोमबार: यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरु पनि उत्तिकै भाग्यमानी हुन्छन। यी व्यक्तिहरुमा स्मरण तेज एकदमै बढी हुने गर्छ। सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरु बोलीमा निकै मिठासपन पाउन सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ।
सोमबार जन्मिने व्यक्ति विध्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन्। यस दिन जन्मेका पुरुषहरु निकै माया गर्ने स्वभावका हुन्छन्। तर अलि लोभी हुने भएका कारण उनीहरुले प्रायजसो आफ्नी श्रीमतीको गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ।
बिहीबार: यस बार जन्मने शान्त र समझदार हुने गर्दछन्। उनीहरु निकै विध्वान र पराक्रमी पनि हुने गर्छन।यिनीहरुको ३० वर्ष उमेर नाघे पछि भाग्य खुल्ने र सोचेभन्दा बढी धन सम्पति कमाउने अवसर मिल्नेछ। बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै पैसा कमाउने गर्दछन् र मन खोलेर खर्च पनि गर्छन्।यी व्यक्तिहरुमा नेतृत्व गर्ने गुण हुने भएकाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेपनि उच्च पद हाँसिल गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
शुक्रबार: शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ । यस दिन जन्मिले व्यक्तिहरु निकै रोमान्चक स्वभावका हुन्छ।उनीहरुको मिठो स्वरले सबैको मन जित्न सफल हुनेगर्छन। यस बर जन्मिने व्यक्तिहरुलाई २० र २४ वर्षको उमेर मा दुख कष्ट पर्ने भएपनि आफ्नो कडा मेहेनत र परिश्रमको बावजुद प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन।
Prevआज ०८ जेठ २०७८ शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ
Next१२ राशिका लागि धन प्राप्त गर्ने १२ उपायः तपाईको कुन राशि ?
काठमाडौ जोरपाटीमा ब्यबसायीको श्रीमति माथि धारिलो हतियार प्रहार
को- रोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? चर्चित ज्योतिष सोम नेपालले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण भबिस्यबाणी (भिडियो हेर्नुस्)
आज ३१ चैत्र मंगलवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17567)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13073)